Erik Ten Hag Oo La Kulmay Madaxda Manchester United Ka Dib Markii Uu Ku Guuleystay Horyaalka Eredivisie
HomeWararka CiyaarahaErik ten Hag oo la kulmay Madaxda Manchester United ka dib Markii uu ku guuleystay horyaalka Eredivisie
May 12, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Erik ten Hag ayaa lagu soo waramayaa in uu khamiistii kula kulmay madaxda Manchester United Amsterdam si uu ugala hadlo qoritaanka kooxda ee suuqa kala iibsiga xagaagan.
Bishii la soo dhaafay, Red Devils ayaa xaqiijisay magacaabista Ten Hag oo ah tababarahooda cusub qandaraas ku eg June 2025, iyadoo dookh u ah sanad dheeri ah, iyadoo heshiiska uu si rasmi ah u bilaaban doono dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer Holland ayaa ilaa haatan la go’aamiyay in uu diirada saaro sidii uu xilli ciyaareedka ugu dhamaysan lahaa Ajax , kuwaas oo ay wali hal kulan oo Eredivisie ka hadhsan yihiin xilli ciyaareedka 2021-22 ee ay la ciyaarayaan Vitesse todobaadkan.
Ajax ayaa xaqiijisatay hanashada horyaalka fiidnimadii Arbacada, inkastoo, ay 5-0 kaga badiyeen Heerenveen, iyadoo kooxda Amsterdam ay ku guuleysatay koobka markii 36aad ee taariikhdeeda.
Sida laga soo xigtay saxafiga ESPN Rob Dawson , Ten Hag ayaa khamiistii kulan shaqaaleysiin ah kula qaatay madaxda Man United Amsterdam si uu ugala hadlo dhaqdhaqaaqa xagaaga ee kooxda.
Dawson ayaa ku andacoonaya in gudaha iyo dibaddaba laga wada hadlay, iyadoo kooxda 20-ka jeer heysata horyaalka Ingariiska ay isku diyaarineyso inay dib u habeyn ku sameyso kooxdooda suuqa soo socda.
Paul Pogba , Jesse Lingard , Juan Mata , Nemanja Matic iyo Edinson Cavani ayaa dhamaantood qarka u saaran inay si xor ah uga tagaan Old Trafford dhamaadka bisha June, taasoo wax badan ka dhimi doonta mushaharka kooxda.
Dhanka kale, mustaqbalka xiddigaha sida Dean Henderson , Phil Jones , Aaron Wan-Bissaka , Alex Telles , Eric Bailly , Marcus Rashford iyo Anthony Martial ayaan wali kala cadeyn.
Cristiano Ronaldo , inkastoo, la filayo inuu sii joogo kooxda xagaagan inkastoo soo jeedin ah in 37-sano jir ah uu doonayay inuu u dhaqaaqo sababtoo ah la’aanta kubad Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Ten Hag ayaa lagu eedeeyay in lagu heli karo 100 milyan ginni si uu ugu qarash gareeyo saxiixyada cusub ee suuqa soo socda, xiddiga Barcelona Frenkie de Jong ayaa haatan si xoogan loola xiriirinayaa kooxda.
De Jong ayaa lagu soo waramayaa in lagu heli karo lacag dhan 60 milyan oo euro (£51m), iyada oo Barcelona ay doonayso in ay hal iib oo weyn samayso xagaagan iyada oo ay jirto dhibaato dhaqaale oo soo food saartay.
Waxaa jira dhowr meelood oo kale oo kooxda ah oo u baahan horumar, inkastoo, iyadoo Ten Hag loo maleynayo inay go’aansatay inay ku soo kordhiso daafac dhexe iyo weerar dhexe oo cusub ka hor xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay khabiirka suuqa kala iibsiga ee Portuguese-ka Pedro Almeida , Benfica ‘s Darwin Nunez iyo Sporting Lisbon ‘s Goncalo Inacio ayaa labaduba aadi karaan Manchester xagaagan.
Nunez ayaa dhaliyay 34 gool waxaana loo diwangeliyay afar caawin 41 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxaana xiddiga reer Uruguay lagu heli karaa lacag dhan £65m.
Dhanka kale, Inacio, oo dhaliyay shan gool, islamarkaana caawiyay labo gool 44 kulan oo uu u saftay Sporting xilli ciyaareedkan, ayaa la sheegay inuu ku iibsanayo €45m (£38.5m) qandaraaskiisa haatan.
Man United ayaa hadda la dagaallaneysa kooxda West Ham United oo ku jirta kaalinta lixaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League , taasoo keeni doonta boos ka mid ah wareegga guruubyada ee xilli ciyaareedka soo socda ee Europa League.